Izvo zvakakosha kuti vatengesi vatange 1: 1 nzendo nevatengi pachiyero, nekukurumidza, uye nemazvo. Imwe yeanonyanya kushandiswa kushambadzira mapuratifomu anoshandiswa nechinangwa ichi ndeye Salesforce Marketing Cloud (SFMC).
SFMC inopa huwandu hwakasiyana hwemikana uye inosanganisa iyo multifunctionality nemikana isati yamboonekwa kuti vatengesi vabatane nevatengi mumatanho akasiyana erwendo rwavo rwevatengi. The Marketing Cloud ichaita, semuenzaniso, kwete chete kugonesa vatengesi kutsanangura mamodheru e data, asi zvakare inokwanisa zvakakwana kubatanidza kana kurodha akawanda data masosi, anozivikanwa sekuwedzera data.
Iko kuchinjika kwakakura kunopihwa neSFMC kunonyanya kukonzerwa nenyaya yekuti mabasa mazhinji muKushambadzira Cloud anofambiswa neSQL mibvunzo. Zviitiko zvekushambadzira senge segmentation, personalization, otomatiki, kana kunyange kushuma zvinoda yakaparadzana SQL mubvunzo muMarketing Cloud kuti vatengesi kusefa, kupfumisa, kana kusanganisa mawedzero edata. Vashoma vatengesi chete ndivo vane ruzivo uye hunyanzvi hwekunyora, kuyedza, uye kugadzirisa SQL mibvunzo vakazvimiririra, zvichiita kuti chikamu chechikamu chitore nguva (saka chinodhura) uye kazhinji chinowanzo kanganisa. Iyo inonyanya kuitika mune chero bhizinesi ndeyekuti dhipatimendi rekushambadzira rinoenderana nerutsigiro rwetekinoroji mukati kana kunze kuti vatore data ravo muSFMC.
DESelect inonyanya kupa kushambadzira data kugonesa mhinduro dzeSalesforce AppExchange. Yayo yekutanga yekudhonza-uye-kudonha mhinduro, DESelect Segment yakanyatsogadzirirwa vatengesi vasina ruzivo rwekodha, zvichiita kuti vakwanise kuendesa chishandiso mukati memaminitsi mashoma ekumisikidza kuti vakwanise kutanga ipapo nekukamurwa kwemapoka anotarirwa avo. mishandirapamwe. NeDeselect Segment, vatengesi havafanirwe kunyora imwechete SQL mubvunzo.
DESelect ine huwandu hwemhinduro dzakagadzirira kuwedzera iyo ROI muSalesforce Marketing Cloud yemakambani:
DESelect Segment inopa intuitive asi ine simba segmentation maficha kuburikidza nesarudzo. Sarudzo inobvumira vashandisi kusanganisa masosi edata uye kushandisa mafirita kuti vagadzire zvikamu nenzira inodzivirira kudiwa kwemibvunzo yeSQL. Kutenda kune chishandiso, vashandisi vanogona kuita masegmentation mabasa muSFMC 52% nekukurumidza uye votangisa mishandirapamwe yavo kusvika %23 nekukurumidza, vachienderera mberi nekushandisa zvizere mikana yakawanda inopihwa neKushambadzira Cloud. DESelect inogonesa vatengesi kuti vagovane, vatarise, uye vagadzirise kutaurirana kwavo vakazvimirira (pasina kudiwa kwenyanzvi dzekunze) uye nehunyanzvi hwekugadzira kupfuura nakare kose.
DESelect Connect ndeyekushambadza data yekubatanidza mhinduro inogonesa kushambadzira otomatiki nyanzvi kuchengetedza nguva nekubatanidza zviri nyore uye kuchengetedza chero data sosi kuburikidza newebhooks (API) kuSalesforce Marketing Cloud uye/kana Salesforce CDP uye kumashure, usingashandisi chimwe chinhu kunze kwekudhonza-kudonhedza zvinhu. Kusiyana nemidziyo mikuru yekubatanidza, DESelect Connect yakavakirwa vashandi-vakangwara vatengesi, ichiita kuti ive nimbler, nemutengo wakaderera uchienzaniswa nedzimwe mhinduro, uye nyore kwazvo kushandisa. Kufanana nemhando dzese dzeDESelect zvigadzirwa, Connect haidi chero nguva yekumisikidza kana kuseta, unongo plug-uye-kutamba. Kunyanya kukosha, haidi kuzvidzora uye yakagadzirwa neSFMC miganho pahuwandu hwema API mafoni.
Dzivisa Kutsvaga haisi itsva, yave iripo uye ichiri seChrome Extension kubatsira vatengesi kutsvaga nyore nyore chero chinhu chiri mugore ravo rekutengesa. Iyo yakazara yakazara bhaa yekutsvaga inobvumidza iwe kuti utarise Data Extensions, kusanganisira:
Mwedzi uno, DESelect yakaburitsawo Tsvaga mukati AppExchange. Sarudzo yekuwedzera chigadzirwa kumusika weSalesforce yaive nekuda kwekuda kwakakurumbira kubva kune vashandisi vanoshanda mumasangano asingatsigire chrome ekuwedzera. Ikozvino, wese Wekushambadzira Cloud mushandisi anowana mabhenefiti eiyi mushandisi-ane hushamwari uye nguva-yekuchengetedza chishandiso.
Join data extensions pamwe chete -Vashandisi vanogona kushandisa kudhonza-uye-kudonhedza kujoinha zviri nyore data rekuwedzera pamwe chete uye kutsanangura kuti ane hukama sei. Admins vanogona kufanotsanangura hukama uhwu.
Usasanganise zvinyorwa -Kufanana nekujoinha mawedzero edata, vashandisi vanogona kuratidza marekodhi avanoda kusabvisa kubva pakusarudza kwavo.
Wedzera zvinyorwa zve data - Zviri nyore nazvo DESelect kubatanidza vanobatika kubva kwakasiyana data masosi pamwechete.
Shandisa sefa maitiro -Vashandisi vanogona kuisa akawanda mafirita mukati medata rekuwedzera uye masosi, vachitsigira ese mafomati emunda.
Ita masvomhu - Subqueries inobvumira kuunganidzwa kwedata uye kuita kwekuverenga, senge mangani akatengwa nemutengi kana kuti yakawanda sei yakashandiswa nemutengi.
Ronga uye ganhurira mhinduro -Vashandisi vanogona kuronga mhedzisiro yavo nealfabheti, nemazuva, kana chero imwe nzira ine musoro. Vanogonawo kuderedza nhamba yemigumisiro kana zvichidiwa.
Tsanangura uye shandisa picklists -Vashandisi vanogona kugovera mapikicha emhando uye mavara se admin, zvichiita kuti timu yavo isefa zvine chokwadi chakawanda.
Seta zvinyorwa zvemanyorero kana zvemitemo -Vashandisi vanogona kugadzirisa mhedzisiro yavo, nekuisa manyore kana mutemo-wakavakirwa tsika, semuenzaniso, chikadzi inova potsa uye Male inova Baba.
Deduplicate zvinyorwa nemitemo -Marekodhi anogona kuderedzwa kuburikidza nemutemo mumwechete kana mizhinji, uchipihwa imwe yekutanga.
Shandisa waterfall segmentation -Vashandisi vanogona kushandisa mitemo yekudonha kushandisa 'waterfall segmentation'.
Parizvino, DESelect inovimbwa nemhando dzepasi rose seVolvo Cars Europe, T-Mobile, HelloFresh, uye A1 Telekom. Iyo kambani mutemo wekuchengeta hukama hwepedyo nevatengi vayo uko kudzidziswa uye yakazvipira rutsigiro munhanho yekutanga, kunyangwe iyo app yakagadzirira kubva pazuva rekuisa, yakabvumira kuenderera nyaya dzebudiriro.
Emerald Nyaya Yokudzidza: California-based Emerald mushandisi weakakura-anogara uye anonyudza zviitiko zveB2B uye zviratidzo zvekutengesa. Yakatangwa muna 1985, iyi mhando inotungamira pamusika yakabatanidza vatengi vanopfuura miriyoni imwe nemazana mapfumbamwe muzviitiko zana nemakumi mana nemaviri uye zvivakwa gumi nenhanhatu zvenhau.
Emerald achangotanga kushandisa SFMC. Nguva pfupi yapfuura mushure mekushandisa gore, timu yavo yekushambadzira otomatiki yakaona kuti kwakakura sei kuvimba neSQL mibvunzo isina mushandisi-inoshamwaridzika mhinduro yevashambadzi vasina hunyanzvi hweSQL. Vakawana kusakwana mukuvaka kunze kwekuwedzera data kare uye vakanetseka nekusagadzikana kwekufanirwa kutsanangura minda yese pamberi.
Vasati vashandisa DESelect, vatengesi veEmerald vanga vasina kuwana dhatabhesi, sezvo timu yavo yepakati yakanga yavaka zvikamu kare. DESelect yakabatsira Emerald mukugonesa timu yekushambadzira kuti iwane uye kutonga data zvese ichigadzira zvikamu zvakanaka, uye zvakazvimirira. Ikozvino, ivo vanototarisa mukuburitsa DESelect kune vatengesi pachavo kuti vagone kugonesa vashandisi vavo veSFMC.
DESelect yakawedzera kushanda zvakanaka ne50%. Zviri nyore kuita chimwe chinhu ad-hoc izvozvi.
Gregory Nappi, Sr. Director, Data Management & Analytics paEmerald
Kuti udzidze zvakawanda nezve sei DESelect inogona kubatsira sangano rako:
Shanyira DESelect Ronga DESelect Demo
Tags: a1 telekomAPIchirevootomatiki kutsvagachrome extensiontsvaga zvemukatidata kuwedzerakubatanidza datadata yekuwedzera segmentationbvisaemail inotumira kutsvagaemail template yekutsvagamaemail templatesneemaradhiSefa tsananguro dzekutsvagagoogle chrome kuwedzeraGregory NappiMhoroFreshquery activities searchquery searchsalesforcevatengesi vanochinjanasalesforce cdpsalesforce kushambadzira goresfmct-MobileVolvo Mota Europe